कांग्रेस आफ्नो अडानबाट टसमस भएन: सरकारलाई यस्तो कडा चेतावनी !
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सरकारलाई संसद छोड्ने धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएको छ। उसले हरेक ठाउँ सविधानको बेवास्ता गरी सरकार अगाडि बढेको भन्दै खबरदारी गरेको छ।
बिहिबारको संसद बैठकमा कांग्रेस नेता मिलेन्द्र रिजालले भने – सरकारका मन्त्रीहरुले काम गर्ने हो की हैन ? की जेल जाने हो भन्दै सबैलाई तर्साउन थालेको आरोप लगाएका छन्।
उनले सरकारलाई नियम, कानुन र सविधान अनुसार चल्न पनि सुझाव दिए। सविधान निर्माणको क्रम सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनु पर्ने भनी व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले दलिय स्वार्थ अनुरुप ब्याख्या गरिनु गलत भएको बताए। रिजालले संसदमा प्रतिपक्षले आफ्नो स्थान नपाउने र संविधान कार्यान्यवन कुरा गर्नु सान्दर्भिक नभएको भन्दै उनले अब आफूहरु संसद छोडेर जनतासामू जाने चेतावनी समेत दिए।
कांग्रेस तत्कालिन एमाले र माओबादी एक भएसंगै सभामुख र उपसभामुख एकै दलबाट हुन नहुने भन्दै लगातार अडान लिंदै आएको छ। यता नेकपाले भने सभामुख र उपसभामुक स्वतन्त्र व्यक्ति रहेको हुँदा कुनै पनि हालतमा यो आफूहरुले पद नछोड्ने बत्ताएको छ।
तर, कांग्रेसको लगातारको अडान र चेतावनीका कारण सरकार सोच्न बाध्य हुन सक्ने अनुमान यतिबेला राजनीतिक वृतमा हुन् थालेको छ।
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ ३१, २०७५१४:०३
राजेन्द्र महतोले भने – ‘संविधान संसोधन नगरे यो सरकारलाई पाप लाग्छ’